Cap Cap azo ampiasaina
Suction faneriterena ratsy
Tube fantsom-pamantarana virus
Name fantsom-paritra virtoaly azo alain-tsindrona-A1 famaritana 5ml, 6ml karazana fitaovana plastika tsy miasa ho fampidirana ampiasaina amin'ny fanangonana santionany, fitaterana sy fitehirizana, sns.
Item Content Quantity 1 Media Face Mask 1PCS 2 Medical Cap 1PCS 3 Instrument Table Cover 1PCS 4 Hand and tànana (40 × 40cm) 4PCS 5 akanjo fandidiana (nohamafisina) 2PCS 6 Laparoscopy Drape 1PCS 7 Medical Wrap 1PCS Item Content Quantity 1 Media Mask Mask 1PCS 2 Cap Cap 1PCS 3 Fitaovana latabatra fitaovana 1PCS 4 lamba famaohana tanana (40 × 40cm) 4PCS 5 akanjo fandidiana (nohamafisina) 2PCS 6 Side Dra ...
1. Safidy habe marobe mba hahazoana antoka fa mety tsara amin'ny haavo AAMI havanana.
2. Akanjo haavo 3 sy AAMI haavo 4 mifototra amin'ny fonosana misy loko miloko sy ny lokon'ny mpanjaka manga an'ny akanjo fandidiana AAMI Level 3 tsy misy fanamafisana.
3. Ny lamba vita amin'ny haitao avo lenta dia mitazona anao hangatsiaka sy ho maina mandritra ny fomba lava be.
4. Azo alaina amin'ny habe, lava ary lava amin'ny endriny isan-karazany.
Ny fandrakofana ny loha dia manakiana satria ny loha dia iray amin'ireo faritra maloto indrindra amin'ny vatana ary miteraka fandotoana lehibe.
Item Content Quantity 1 Instrument Table Cover (150 × 190cm) 1PCS 2 Unity Drape (60 × 75cm) 6PCS 3 Appendix Operation Drape (150 × 200cm) 1PCS 4 Cap Cap (savaivony 48cm) 3PCS 5 Hand and tànana (30 × 34cm) 3PCS 6 Tweezers (12.5cm) 4PCS 7 Mayo Stand Cover (80 × 145cm) 1PCS 8 Saron-tava fitsaboana (tadivavarana 3-ply) 3PCS 9 Akanjo fandidiana nohamafisina (125 × 150cm) 3PCS Fitaovana: SMS, lamba lamination Bi-SPP, Tri- SPP La ...
1. vita amin'ny kilasy fitsaboana tsy misy poizina PVC, tsy misy DEHP, tsy misy fofona.
2. tendrony malefaka, tendrony mahazatra, tendrony mirehitra ary tendrony malefaka safidy.
3. Miaraka amin'ny fantsona 2m na azo namboarina, ny fantsom-piadiana anti-crush dia afaka miantoka ny fanarahana oksizena na dia kink aza ilay fantsona.
4. Habe azo: Audlt, Pediatric, Infant, Neonatal.
5. Loko: mangarahara maintso, fotsy mangarahara ary mangarahara manga mazava ho an'ny safidy.
6. Fonosina ao anaty kitapo PE tsirairay. Namboarina tamin'ny entona EO, 100 pcs / ctn.
Fantsona oksizenina / Cannula orona
Nasal Oxygen Cannula dia fitaovana fitaterana Oksizenina misy fantsona roa, ampiasaina hanaterana oksizenina fanampiny amin'ny marary na olona mila oksizenina fanampiny.
Ny kanelina nasal dia ampiasaina ho an'ireo marary izay tsy mila oksizenina fanampiny mihena fotsiny. Ireo marary manana fahasahiranana amin'ny fifohana rivotra sy ny toe-piainana toy ny emfisema na lalan-dra pulmonary hafa dia mitaky ny kanelina nasal. Ny tahan'ny fikorianan'ny cannula dia manodidina. 4 ka hatramin'ny 5 litatra isa-minitra (LPM).
1: Teknolojia patanty amin'ny famolavolana integral, tanjaka avo lenta, tsy mora lavo ary tafasaraka, malefaka tsara.
2: Izy io dia mahazaka hafanana avo sy famonoana otrikaina avo, azo ampiasaina indray.
3: Ny fitambarana dia vita amin'ny famolavolana tsindrona tsy misy famoahana entona.
4: Ampiasaina indrindra ho an'ireo marary miasa amin'ny fanatoranana sy oksizenina; marary aorian'ny fahasitranana.
5: Fanohanana sy fikarakarana ny marary voan'ny taovam-pisefoana aorian'ny fandidiana.
Toerana misy ny vokatra:
1. Vita amin'ny famolavolana tsindrona plastika PS, tsy misy poizina, tsy mahasosotra.
2. Izy io dia afaka manitsy araka izay itiavany azy, ny sisiny malama avy amin'ny resin-plastika tsy misy, ny ahiahy avy amin'ireo marary.
3. Ho an'ny fampiasana tokana ihany, sterile raha tsy hoe misokatra na simba ny fonosana, esorina amin'ny oxygène etilène.
4. Size: L, M, S
5. IFU: ampidiro moramora amin'ny fivaviana ny faktioran'ny ganagana, atodiho ny visy hanamboarana ilay spéulul.
Efitra fandidiana, departemanta fandidiana ankapobeny, departemanta momba ny fitsaboana aretin-tsaina, departemanta momba ny aretim-behivavy, sampana famokarana, departemantan'ny urolojia, departemanta orthopedika sns.
Catheter manome sakafo
Ny catheter dia ampiasaina amin'ny fihenan'ny tsindry amin'ny gastrointestinal na fampidiran-dra na fivoahana.
Catheter fanariana tsindry ratsy
Ny ratra avy amin'ny mpanome na ny fantson'ny lalan-dra mihidy.